YawNathan Zinyaw: အမှတ်တရ ဒီဇင်ဘာည တစ်ည
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 2:06 AM
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော...
ဖတ်ပြီး အနော်ပါပျော်လာတယ်.. အဟီး..
ကလေးဘ၀လေးတွေ ပြန်တွေးမိရင် ရယ်လည်းရယ်ရပြီး ပြန်လည်းတောင့်တာမိတယ်..
merry christmas ပါ အစ်မရေ။
အမက ဈေရ၀တီသကြားစက်မှာ နေခဲ့တာလား။
အတိတ်ဟာ လွမ်းစရာတွေ များတယ်နော်
အမရယ့် ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို
အမသားလဲ အဲလို လိုက်ဆိုရင် ပျော်နေတာပဲ သိလား။
ဟုတ်တယ်နော်။ ဒီဇင်ဘာလဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ အပျော်တွေအလိုလိုရောက်လာတယ်။ ကဲ ချင်လို့ နေမှာ။
စကားမစပ် ! Word Verification ကိုဖြုတ်ပေးပါလား။ ကွန်မန်းရိုက်ရတာ ပိုအဆင်ပြေလို့။
အစ်မ.. ကျွန်တော် ကွန်မန့်ရေးရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျ... ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး.... ကွန်နက်ရှင်လည်းကောင်းတယ်....
ကျွန်တော်လည်း ခရစ္စမတ်မှာ သီချင်းလိုက်ဆိုခဲ့တာတွေကို ပြန်အမှတ်ရသွားတယ်။ ချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့ အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သီချင်းဆိုပြီးသွားရင် မီးပုံပွဲလုပ်ကြတယ်လေ။ အဲဒီအချိန်တွေကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ်။
ဤအိမ်ပေါ်ကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်စေသောဝ်... ကို ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေက ဤအိမ်ပေါ်ကို ကောက်ညှင်းပေါင်းတွေ ရောက်စေသောဝ်..ဆိုပြီး ဖျက်အော်ကြတာ... ပြန်လွမ်းတယ်...
Merry X'mas ပါ..
တို့ကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆောင်းတွင်းဆို ကြိုက်တယ်ဟေ့ ၊ အေးအေးနဲ့ ကျောင်းမတက်ဘဲ အိမ်မှာအိပ်နေလွန်းလို့ ဆရာမက တိုင်စာခဏခဏပို့ပါ့၊ အခုတော့ အိပ်ချင်လည်းကုန်းရုန်းထနေရတဲ့ဘ၀ ညီမေ၇းတာလေးဖတ်ပြီး ငယ်ဘ၀တွေကို ပြန်လွမ်းမိတယ်
ဒီခရစ်စမတ် မှာ အရင်ကထက်ပိုပျော်ပါစေ
I miss Kyi Kyi Myint's fried rice with BBQ pork that we ate early morning in Pyin Ma Nar.
ပျဉ်းမနားဆိုရင် အမ ရေဇင်းမှာ စာသွားရေးဖူးတာ သတိရတယ်.. ရေဇင်းဆည်ပေါ်က ကြည့်ရင် ဖုံတထာင်းထောင်းထနေတဲ့ လှည်းလမ်းကြောင်းလေး တွေကို ဆီးမြင်ရတာ.. ရင်ခုန်စရာ သက်ဝင် ပန်းချီကားပဲ.. အညာရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာတခုလိုပဲနော်..။
မောင်လေးပီတိ၊ ညီမ mirror၊ မောင်လေးCraton၊ ကိုအောင်၊ မခင်မင်းဇော်၊ ကိုဟန်လင်းထွန်း၊ အကိုဆောင်းယွန်း၊ မမိုးနေ၊ မKOM၊ ကိုကမာ၊ ပေးဆပ်သူ၊ ကွန်မန့်ပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမိုး တို့အလည်လာတာကိုတောင် သိပ်မမှတ်မိလိုက်ဘူး မှတ်မိရင်ထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာမ .. ရေဇင်းဆည်ရယ် ရေဇင်းတက္ကသိုလ်ရယ်ကို ခဏခဏရောက်တယ်။ ဧည့်သည်တွေကို လိုက်ပို့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ မြင်ကွင်းတွေသိပ်လှတယ်နော်...။